မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): Gmail နဲ့ Facebook ပတ်စ၀ပ်တွေခိုးရာတွင်သုံးနိုင်သော ဆော့ဝဲကောင်းတစ်ခု
Gmail နဲ့ Facebook ပတ်စ၀ပ်တွေခိုးရာတွင်သုံးနိုင်သော ဆော့ဝဲကောင်းတစ်ခု
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ပတ်စ၀ပ်တွေ ခိုးလို့ ရနိုင်သလို ပတ်စ၀ပ်မေ့နေတာကိုလည်း
ပြန်ဖော်လို့ ရပါတယ်။ ဖော်လို့ ရတာတွေက ExceL,word,Powerpoint နဲ့PDFများ
တခြားဟာတွေလည်း ပြန်ရှာလို့ ရပါတယ် ၊Mozila, Chrome တို့ နဲ့ သုံးလိုက်တဲ့မေး
ဖေ့ဘွတ် အကုန်ပြန်ပေါ်လာပါတယ် ။ ဒီဆော့ဝဲသွင်းထားတဲ့ စက်မှာသာ သုံးပီးလို့ 
ဒီတိုင်းထားခဲ့ရင် စက်ပိုင်ရှင်က ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ပြန်ရှာလိုက်ရုံပဲနော် အန္တရယ်လည်း
ရှိသလို အသုံးချရင် အကျိုးလည်းရှိပါတယ်။ နောက် ၀င်းဒိုးပတ်စ၀ပ်မေ့တာကိုလည်း
ဒီဆော့ဝဲလေးက ကူညီနိုင်ပါတယ် ။ အသုံးချလို့ ရတာကတော့ အများကြီးပဲ ဆွဲပြီးမှ
ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ပါ ကျနော်လည်း လေ့လာကြည့်နေဆဲပါ ။ဒီဆော့ဝဲနဲ့ ရှာလဲ
ပြန်မပေါ်အောင် လုပ်လို့ ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သာမာန်သုံးသူ တစ်ယောက်ဆိုရင်
မေးဝင်တယ် ချက်တင်ထိုင်တယ် ဖေ့ဘွတ်သုံးတယ် တခြားနည်းပညာမသိဘူးဆို
အဲ့လိုအကောင့်တွေကိုတော့ ဒီဆော့ဝဲထည့်ထားတာနဲ့ ပြန်ရှာလို့လွယ်နေပါတယ်
အကောင့်ခိုးဖို့ သုံးလို့ ရသလို Miscrosoft Office က မေ့နေတဲ့ ပတ်စ၀ပ်တွေကို
ပြန်ရှာပေးပါတယ် ။ နောက်ပြီး စက်ထဲမှာ အင်စတောလုပ်ထားခဲ့တဲ့ ဆော့ဝဲတွေရဲ့
Product key တွေလည်းလာပေါ်တယ် အသုံးပြုပုံက လွယ်ပါတယ် လေ့လာလိုသူ
လေ့လာကြည့်ပါ -အထဲမှာ ကီးဖိုင်ပါပါတယ် Fullversion ပါ...........................။
အကောင့်ခိုးဖို့ သီးသန့်မဟုတ်ပေမယ့် ဒီဆော့ဝဲထည့်ထားတဲ့ စက်တစ်ခုခုမှာဝင်
မေးတွေဖွင့် ချက်တင်တွေလုပ် ခဏနေအကောင့်က ထွက်လိုက်ပေမယ့် ရှာဖွေဖို့ 
နည်းတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ဗဟုသုတရှိစေချင်တာပါ ။ ပညာရှင်ကြီးတော့
ဟုတ်သေးဘူး ။ ကျနော်လည်း အလုပ်တဖက်နဲ့လေ့လာရင်း ပညာရှာနေတာပါ
ကိုဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုရင် သူများလည်းဖတ်သင့်တယ် အကျိုးရှိလည်းရှိရင်
အဲ့လိုစာအုပ်ကို ကျနော်ပြန်ဖြန့် ပေးပါတယ်။ ဆော့ဝဲဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ သုံးကြည့်
ကောင်းတယ် အကျိုးများတယ်ဆိုရင် ပြန်မျှဝေပေးတာပါ ။ အဲ့တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ
ဆက်လက့်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ.။ အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါ၏
Keylogger လို့Hacking သီးသန့် မဟုတ်ပါဘူးအကျိုးရှိစွာ သုံးလို့ ရပါကြောင်း.။
အပေါ်ကမရသူများဒီလင့်ကယူပါ - http://www56.zippyshare.com/
Author Anonymous at 2:27:00 AM
Labels: Excel Password ပြန်ရှာနည်း, Facebook Hacking, Hacking နည်းပညာများ
IDM နဲ့ ဒေါင်းလို့ မရဘူး
ma ya boo...
ပြေတဲ့သူက ပြေ မပြေတဲ့သူက မပြေကြဘူး Ziddu က ဒေါင်းလုပ်ယူနည်းဖတ်ပါအုံးနော် အဆင်ပြေမှာပါ
i can try only one account? how to change other account?
မဟုတ်သေးဘူးအကို...ခလုတ်မှားနှိပ်တာမဟုတ်ဘူး...ခလုတ်နှိပ်တာလည်းမှန်တယ်...ဖြစ်နိုင်ရင် Mediafire ကနေတင်ပေးကြည့်ပါလား..